TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်ထောက်စစ်ဆေးရေးသည်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုကြေငြာပါသည်။ | RayHaber | raillynews
[23 / 02 / 2020] TCDD အမြန်ရထားအာမခံထားမထားပါဘူး	06 တူရကီ
[23 / 02 / 2020] ဝန်ကြီး Ersoy သည်အရှေ့ Express နှင့်အတူSarıkamışသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်	36 Kars
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD ပို့ဆောင်ရေး receiver လက်ထောက်စစ်ဆေးရေးကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
TCDD ပို့ဆောင်ရေး receiver လက်ထောက်စစ်ဆေးရေးကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
01 / 12 / 2017 06 တူရကီ, ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် (TCDD) ကစစ်ဆေးရေးမှူးဧည့်ခံကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏အသိပေးစာသည့်တရားဝင်ပြန်တမ်းထဲမှာထုတ်ဝေနှင့်အတူစတင်နေဆဲဖြစ်သည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေမတိုင်မီစာမေးပွဲဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးန်ဆောင်မှုများဟာသမ္မတအတွက်အသုံးချခံရဖို့န်ထမ်းများ၏ 8 စုစုပေါင်းလက်ထောက်စစ်ဆေးရေးတည်ရှိသောအလွတ်ထဲကနေ9ကြိမ်မြောက်ဒီဂရီမှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိန်းစေရန်စာသင်ခန်းထဲမှာထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ 2018 ဇန်နဝါရီလအတွင်းစာမေးပွဲမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အလုပ်ချိန် (22) ၏အဆုံးအဘို့ဝယ်ယူ applications များ၏ဒီဇင်ဘာလ 2017 17.30 နေ့စွဲအတွက် TCDD လက်ထောက်စစ်ဆေးရေးမှူးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးပြီးနောက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဇန်နဝါရီလ62018 စာမေးပွဲတွင်အတွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို၏စားသုံးမှုအကဲဖြတ်ရန်ရန်ဆန္ဒရှိသူများသည် စစ်ဆေးရေးဘုတ်အဖွဲ့Çankayaခရိုင်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, Anafartalar Mah ။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်3Çankaya / တူရကီ PK 06330 လျှောက်လွှာ Form ကို "" ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်ကနေ (www.tcddtasimacilik.gov.t) သူတို့ပေးလိမ့်မယ် "လုံးဝထွက်ဖြည့်မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရပေမည်။ ထိုအခါဤပုံစံအားဖြင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသို့မဟုတ် mail ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောလိပ်စာမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏လိမ့်မည်။
အပိုဒ် (က) တာဝန်ရှိသူများဥပဒေအမှတ် 1 657- တိတ် xnumx'inc အေးဂျင့်အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားအထွေထွေအခြေအနေများ,
2- 01 / 01 / 2018 35 ရက်စွဲ၏အဖြစ်နှစ်အောက်ဖြစ်,
3- ဥပဒေရေးရာ, နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲမှု, စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့်အာဏာပိုင်များအားဖြင့်မွေးစားပြည်တွင်းအနည်းဆုံး4အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံကောလိပ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးနှစ်နှင့်၎င်းတို့၏ညီမျှပေးခြင်းသို့မဟုတ်ပြည်ပမှာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများများထဲမှပြီးစီးခဲ့ပြီ,
အဆိုပါ Group က 4- SSPC အချက်များရရှိရန် 2017 ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲ (KPSS) KPSS P48 ရမှတ်အမျိုးအစား 70 နှင့် သာ. ကြီးမြတ်စံချိန်နှင့်အတူ လုပ်. , ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှာတည်ရှိပါတယ် 90 လျှောက်ထား၏အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုကနေစတင် sorting ရလဒ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည် (90 Inc ကိုဆန်ခါတင်နှင့်အတူအားလုံးတန်းတူအချက်များ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ) စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်
5- အရာစုံစမ်းစစ်ဆေးနောက်ဆုံးမှာတစ်ပြည်နယ်စံချိန်နှင့်အကျင့်စရိုက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတားအဆီး Inspector ရှိလိမ့်မည်,
ကိုယ်စားလှယ်ဥပမာ Inspector ၏အဖြစ်လိုအပ် 7- စာကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်။
b) Sınav Başvuru Formu (Teftiş Kurulu Başkanlığından veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinden temin edilen),
မူလတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ printout ၏ရလဒ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ KPSS ဥပမာအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့က c) သက်ဆိုင်ရာ unexpired အဖွဲ့အစည်းများ,
ဃ) ဥပဒေရေးရာ, နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲမှု, စီးပွားရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးသိပ္ပံပြည်တွင်းဌာနနှင့်ညီမျှအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ညီမျှ၏လက်မှတ်၏မူလမိတ္တူ, ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပမှာပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကနေဘွဲ့ရခဲ့ကြပါသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကအသိအမှတ်ပြု copy သူကား,
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတူင) နှစ်ဦးဓာတျပုံ (4,56စင်တီမီတာ x ကို), ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့သမ္မတသက်ဆိုင်စေရမည်။
Written စာမေးပွဲကို 2-အနိုင်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများပါးစပ်စာမေးပွဲမဝင်ခင်လိုအပ်သည်။
အတားအဆီးအဖြစ်ကျန်းမာရေး-related တာဝန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြောင်းက) စာဖြင့်ရေးသားကြေငြာ,
က c) ထိုမျှမပြစ်မှုဆိုင်ရာစံချိန်ရေးသားထားသောကြေငြာ,
ဂ) အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ CV ကို,
4,56စင်တီမီတာက x ဃ) လေးဓာတ်ပုံတွေ () ။
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က9လက်ထောက်စစ်ဆေးရေးမှူးလိမ့်မည်
လက်ထောက်စစ်ဆေးရေးအင်တာဗျူးကြေညာချက်ကနေ TCDD Taşımacılık ''
ဆုရရှိသူလက်ထောက်စစ်ဆေးရေး TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကကြေညာလိုက်သည်
ယောဘသည်: လက်ထောက်စစ်ဆေးရေး TCDD ယ်ယူရန်ခဲ
TCDD လက်ထောက်စစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲများ၏ကြေညာချက်များ Winners
TCDD သည် Assistant Inspector Exam စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရှိသူများစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနလက်ထောက်စစ်ဆေးရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ ယ်ယူရန်
ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်ထောက်စစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲအတွက်လျှောက်ထားသူများ
Assistant Inspector ၀ ယ်ရန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏လက်ထောက်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန
TCDD လက်ထောက်ဧည့်ခံ inspectors
ဝန်ကြီး Arslan: "အမျိုးသားအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလုပ်ငန်းစဉ် Started"
mahmutlar ၏ demirkolllll ဟုသူကဆိုသည်:
နှင့်အခြားသီအိုရီရန်စနစ်၏alınmamalı.demiryol benzemez.demiryol almalı.demiryolသိတယ်သူပြင်ပမှစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏စာမေးပွဲသည်စကားလုံးများကို Inspector စီးပွားရေးလုပ်ငန်း tools တွေကိုမသိနိုငျပါဘူး။ စသည်တို့ကိုစသည်တို့ကိုသင် 15 တစ်နှစ်ထွက်ရဖို့ကိုမျှော်လင့် bilmeli.yoks စစ်ဆေးရေးမှူးရထားလမ်းဘရိတ်မော်ဒယ်များအထိမ်းအမှတ်မည်သူရထားကလူ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဖေဖော်ဝါရီလ 24 1933 ပြင်သစ် Wagon
အသစ်လျှပ်စစ် Vespa မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ပြပွဲတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
မော်တော်အားကစား Gemlik ၏စင်တာသစ်